KATHMANDUTemperature 21°CAir Quality30
“अनेक कविका अनेक कविता सुनेर आज हाम्रो कान पवित्र भइगएको छ,” परम सुन्दरी उद्घोषिकाले रुघौली आवाजमा भनी, “कार्यक्रमको पुछारमा अब आफ्नो पोयट्री रिसाइटेसन गर्न हामीमाझ आउँदै हुनुहुन्छ– कुमार नगरकोटी । आउनुस् दर्शकवृन्द, मिस्टर नगरकोटीलाई गालीले माफ गर्नुस्, तालीले स्वागत गरौँ ।”
हल करतल ध्वनिले गुञ्जायमान भयो ।
म मञ्चमा उक्लिएँ । पोडियमतिर लम्किएँ । माइकसामु उभिएँ र कुनै औपचारिक सम्बोधनबिनै पोयट्री रिसाइटेसन गर्न थालेँ ।
।। पोयट्री ।।
पोयट्री एक साउथ कोरियन फिल्म हो । यस्तो फिल्म, जहाँ दृश्य आरम्भ हुनुअघि खोलाको कलकल जलध्वनि तपाईंहरुको कानमा गुन्जिन थाल्छ । खास्साको कुरो त के भने त्यो जलध्वनिको पाश्र्वगुञ्जनलाई फिल्मको अन्त्यपश्चात् देखिइने ब्ल्याक स्क्रिनमा समेत महसुस गर्न सकिन्छ ।
ओपनिङ दृश्यमा हामीलाई एक युवतीको लास देखाइन्छ, जो पानीमा बगिरहेको छ ।
त्यसपछि क्यामेराले हाम्री नायिका मिजाको दैनन्दिन जीवनलाई पछ्याउन थाल्छ । ६६ वर्षीया मिजालाई अल्जाइमर्स रोगले बिस्तारै–बिस्तारै गाँज्दै छ । सम्पूर्ण स्मृतिहरु मनमस्तिष्कबाट शनै: शनै: मेटिइनुअघि उसलाई बाँकी जीवन उत्सवमय बनाउनु छ । केही सुन्दर सम्झनाहरु नोटबुकमा छाडेर जानु छ ।
बुढेसकालमा ऊ पोयट्रीका क्लासमा भर्ना भएकी छे । स्मृतिहरुबाट लोप हुनुअघि उसलाई कम्तीमा एउटा कविता लेख्नु छ । आफ्नो ब्यागमा स्यानो नोटबुक बोकी ऊ अस्तित्वभरि हिँडडुल गरिरहेकी छे । कविताको प्रेरणाको स्रोत कहाँ छ ? त्यसैको खोजीमा ऊ आफ्नो स्यानो जगतमा भौतारिएकी छे । नोटबुकमा शब्दहरु जम्मा गरिरहेकी छे ।
किन्तु उसको जीवन काव्यमय हुन सकेको छैन । सौन्दर्यको काव्यिक खोजी एकातिर छ र यथार्थको कुरुप विडम्बना अर्कोतिर । उसको जीवनमा तालमेल मिलिरहेको छैन ।
अब एकछिन पोयट्रीको लासबारे थोरबहुत चर्चा भइजाओस् । त्यो लास, जो युवतीको हो । युवती, जसको नाम कुन्नि के हो ? कुन्नि के, जसलाई फिल्मको ओपनिङ दृश्यमा देखाइएको थियो ।
युवतीले आत्महत्या गरेकी थिई, पुलबाट हाम फालेर । उसको डायरीमा आफूलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने केटाहरुको नाम फेला परेको छ । केटाहरुका अभिभावकजन भेला भई मृतककी आमालाई केही रकम क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेका छन् । मिजाको भागमा पनि पाँच लाख परेको छ, जसलाई उसले कसैगरी खोज्नु परेको छ । किनभने उसको नाति पनि युवतीको आत्महत्यामा जिम्मेवार छ । मिजा ठूलो संकटमा छे ।
दरिद्र घरेलु कामदार मिजालाई पर्नु पीर पर्‍या छ । उसले हेरविचार गर्ने अर्धप्यारालाइसिसको वृद्ध रोगीले यस्तै बेला ऊसमक्ष बाथटबमा करुण याचना गरेको छ, ‘मिजा, म चाँडै मर्दै छु । मर्नुअघि आफ्नो पुरुषत्व महसुस गर्न चाहन्छु । जीवनको अन्तिम सम्भोग म तिमीसँग गर्न चाहन्छु ।’
मिजाको संसार छिन्नभिन्न हुँदै छ । स्मृतिहरु नष्ट हुँदै छन् । अँध्यारो जीवनमा उसलाई साथ दिने केवल एक नोटबुक छ, जहाँ उसलाई कविता लेख्नु छ । अक्षर एवं शब्दहरु जुगाड गर्नु छ । किन्तु अक्षरहरु अल्जाइमर्सग्रस्त छन् । मिजाको दिमागबाट शब्दहरु हराउँदै गइरहेका छन् ।
हलमा उपस्थित कविजन एवं कवयित्री गण ! कविताको जन्म कहाँ हुन्छ ? हामीले नोटबुकमा लेख्ने सबै अक्षर एवं शब्दहरु कविता बन्छन् ? फिल्मले यसबारे केही भन्दैन । अन्त्यमा, मिजा कहाँ बेपत्ता हुन्छे, त्यो पनि खुलाउँदैन । फिल्ममा अलपत्र छाडिएको मिजाको नोटबुकलाई भने मैले केही वर्षअघि उसैको घरमा भेटेको थिएँ ।
त्यो नोटबुकलाई मैले आज आफूसितै लिएर आएको छु । म चाहन्छु, हामी सबै मिली यो खाली नोटबुकमा केही सुन्दर शब्दहरु लेखौँ । मिजालाई याद गरौँ ।
त्यसपछि म मञ्चबाट ओर्लें र मिजाको नोटबुक कविहरुलाई दिएँ, जहाँ उनीहरुले पालैपालो एक–एक शब्द लेखे । त्यो नोटबुक मसित अझै सुरक्षित छ । अचेल पनि बेलाबखत खोलेर हेर्ने गर्छु ।
मिजाको चरित्रलाई जीवन्त अभिनयमार्फत संसारभरका सिने दर्शकहरुलाई मन्त्रमुग्ध पारेकी अभिनेत्री जुन जियोङ ही पोयट्रीपश्चात् अरु फिल्ममा देखा परिनन् । कोरियन सिनेमाका ल्यान्डस्केपबाट उनी रहस्यमय तरिकाले बेपत्ता भइन् । ७५ वर्षीया अभिनेत्रीबारे कसैले खोजखबर पनि गरेन ।
केही समयअघि उनका पियानोवादक पति कुन वु पाइकले एउटा म्यागजिनमा अन्तर्वार्ताका क्रममा भने, ‘पोयट्री फिल्म गर्दा मेरी पत्नी स्वयं अल्जाइमर्ससित लडिरहेकी थिइन्, मिजाझैँ । अचेल त उनलाई केहीको सम्झना रहँदैन । उनको सम्पूर्ण स्मृति नष्ट भइसकेको छ । तर कहिलेकाहीँ उनी मसित मिजाको नोटबुकबारे सोध्ने गर्छिन् । साँच्चि त्यो नोटबुक कहाँ होला ? कोसित होला ?’